Imidlalo yesiphelo ilula ukuyifaka kwaye uyonwabele | Ubunlog
Imidlalo ye-Ubuntu Terminal
Abathandi beLinux bahlala bechitha ixesha elininzi besebenzisa i-terminal. Ekuqaleni kunokuba yinto enesiyezi ukuyisebenzisa, kodwa ekugqibeleni iyaphela iba liqabane elithembekileyo esaziyo ukuba singenza yonke into ekudaleni iifayile, ukuthumela ii-imeyile, ukujonga imozulu nokunye okuninzi.
Ngale icaciswe ngasentla, kutheni ungachithi ixesha udlala kuyo? Ngokucacileyo ngekhe babenjalo imidlalo yanamhlanjeNokuba bobugcisa be-state-of-art kwaye abayi kuba nemizobo emihle, ngokuchaseneyo. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo Iiklasikhi okanye izinto zakudala ezahlukileyo ezingaze ziphume kwisitayile ngenxa yendlela ezilikhoboka ngayo.
1 Imidlalo ye-Ubuntu Terminal
6 Inyanga Buggy
7 I-Linux iLunar Lander
Kuluhlu oluncinci ayizizo zonke ezinokuba njalo, kuba mininzi imidlalo yesiphelo Kwaye baya kwenza olu luhlu lungapheli. Ndiza kuzama ukubonisa, ngendlela endibona ngayo eminye yemidlalo emihle yesiphelo KwiLinux. Imiyalelo yokuyifaka eya kuboniswa iya kuba ye-Ubuntu. Ukuba uyazifuna kolunye ulwabiwo, kuya kufuneka ubeke endaweni "yesudo apt" xa ufaka umdlalo ngomyalelo ngokulandelelana kwawo onje nge "yum" okanye "dnf" ngokufanelekileyo.
Ngubani ongawukhumbuliyo umdlalo apho usebenzisa inqwelomoya (okanye into efanayo) ukubulala abaphambukeli? Oko ndimncinci bendihlala ndingumntu othanda le midlalo apho kufuneka ubulale abaphambukeli.
Ukufakela lo mdlalo omnandi kunye nomlutha kufuneka uvule i-terminal kwaye uthayiphe:
Ukwazisa umdlalo kuya kufuneka uwubize ngegama:
Olunye uhlobo lomdlalo olikhoboka owaziwayo kwihlabathi liphela (akukho ngaphandle). Lo ngumdlalo wenyoka oqhelekileyo oza kuwufumana kwiifowuni ezindala zakwaNokia okanye kule ikhutshwe kulo nyaka. Inyoka iya kukhula njengoko ulawula ukuyigcina ingazilumi okanye ibethe eludongeni.
Ukufaka iNsnake, chwetheza lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
Ukuyiqala, kuya kufuneka uyibize ngegama layo:
Eli lilitye (lamawaka akhoyo) yeyona nto idumileyo kunye nomlutha kwimbali yevidiyo, iTetris.
Ukufaka oku kwahlukileyo kweTint kufuneka usebenzise lo myalelo ulandelayo:
Ukuyiqala kufuneka ubhale:
Ngubani ongaziyo okanye ochithe iintsuku edlala i-pacman eyaziwayo? Ngolu luhlu unokonwaba ngokufanayo kwi-Linux terminal ngokufaka iPacman4Console.
Ukuyifaka siya kwisiphelo sendlela kwaye sibhala:
Ukuyiqala, sikubiza ngegama lakho. Kule meko, kuya kufuneka ukhumbule ukwandisa iwindow kuba isisombululo sayo siphantsi kakhulu:
Olunye uhlobo olukhulu lwePacman yiMyMan. Isisombululo esingcono kakhulu. Kwi elandelayo unxibelelwano Unokuzikhuphelela ifayile eyimfuneko kwaye apho siza kuboniswa ukuba siyifaka njani.
Ukudlala lo mdlalo kufuneka ulidlule ixesha lokutsiba kunye nokudubula. Ezi zinto zimbini ziya kukwenza udlale iiyure kunye neeyure. Ekuphela kwento anokuyibeka kukukhotyokiswa kwakhe likhoboka.
Ukuyifaka siza kuyenza kwisiphelo sendlela:
Ukuqalisa umdlalo, siza kubhala igama lawo:
I-Linux iLunar Lander
Lo ngumdlalo omnandi. En el tienes que volar en un módulo lunar durante su última etapa de descenso con una cantidad limitada de combustible en los tanques.
Lo mdlalo unokukhutshelwa kwiphepha lalo leGithub koku kulandelayo unxibelelwano.
INudoku ngumdlalo wesiphelo okopa isitayile seSudoku. Imowudi yemidlalo yeNudoku ifuna ukuba umdlali, ngokwengcinga, azalise iigridi eziyi-9 × 9 ezinamanani ukusuka ku-1 kuye ku-9.
Ukuyifaka, kuya kufuneka uye kwiphepha layo GitHub kwaye uyikhuphele.
Ayingomdlalo omnye, kodwa ingqokelela enemidlalo eyahlukeneyo yesiphelo ebandakanya ezinye zezo zikhankanywe apha ngasentla. Ukuyikhuphela kuya kufuneka ulandele oku kulandelayo unxibelelwano kwaye jonga kwinkcazo. Apho uyakufumana ifayile yokukhuphela.
Ngale nto ndivala olu luhlu lincinci. Ndizamile ukubonisa yonke into kodwa ndicinga ukuba abantu bazakudlala okanye badibane nabanye abangabizwanga ngamagama. Ukuba kukho umntu owaziyo imidlalo emininzi yesiphelo, ungathandabuzi ukubashiya kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo ye-Ubuntu Terminal
Impazamo ebulalayo ivela kwi-Ubuntu 17.04 kunye ne-16.10 yokungena kwesikrini